राजधानी नजिकका हिमाल खुल्दै | .:: Welcome || Paryatannews
Home » अन्तर्वार्ता » राजधानी नजिकका हिमाल खुल्दै
राजधानी नजिकका हिमाल खुल्दै
सरकारले पहिलोपटक राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको सिन्धुपाल्चोकका दुई हिमाल आरोहण खुला गरेको छ । पछिल्लोपटक एक सय चार हिमालमा आरोहण अनुमति दिँदा यहाँका याङग्री र लेन्पोगाङ (इस्ट) परेका हुन् ।
जुगल हिमशृंखलामा पर्ने दुवै हिमाल जिल्लाका उत्तरपूर्वी गुम्बा गाविसमा छन् । पर्यटन प्रवद्र्धकहरुको लामो प्रयासपछि दुई हिमालले पर्वतारोहण अनुमति पाएका हुन् । याङग्री ६ हजार ६ सय ३५ र लेन्पोगाङ हिमाल ६ हजार ६ सय ३३ मिटर अग्लो छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा थुप्रै हिमाल छन् । साढे पाँच हजार मिटर अग्ला हिमालमात्रै दर्जन हाराहारीमा छन् । सिन्धुपाल्चोकलाई हिमालको जिल्ला भन्न उपयुक्त हुने स्थानीय बताउँछन् ।सरकारले पहिलोपटक राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको सिन्धुपाल्चोकका दुई हिमाल आरोहण खुला गरेको छ । पछिल्लोपटक एक सय चार हिमालमा आरोहण अनुमति दिँदा यहाँका याङग्री र लेन्पोगाङ (इस्ट) परेका हुन् ।
सिन्धुपाल्चोकमा थुप्रै हिमाल छन् । साढे पाँच हजार मिटर अग्ला हिमालमात्रै दर्जन हाराहारीमा छन् । सिन्धुपाल्चोकलाई हिमालको जिल्ला भन्न उपयुक्त हुने स्थानीय बताउँछन् सरकारले पहिलोपटक राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको सिन्धुपाल्चोकका दुई हिमाल आरोहण खुला गरेको छ । पछिल्लोपटक एक सय चार हिमालमा आरोहण अनुमति दिँदा यहाँका याङग्री र लेन्पोगाङ (इस्ट) परेका हुन् ।
सिन्धुपाल्चोकमा थुप्रै हिमाल छन् । साढे पाँच हजार मिटर अग्ला हिमालमात्रै दर्जन हाराहारीमा छन् । सिन्धुपाल्चोकलाई हिमालको जिल्ला भन्न उपयुक्त हुनेसरकारले पहिलोपटक राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको सिन्धुपाल्चोकका दुई हिमाल आरोहण खुला गरेको छ । पछिल्लोपटक एक सय चार हिमालमा आरोहण अनुमति दिँदा यहाँका याङग्री र लेन्पोगाङ (इस्ट) परेका हुन् ।
सिन्धुपाल्चोकमा थुप्रै हिमाल छन् । साढे पाँच हजार मिटर अग्ला हिमालमात्रै दर्जन हाराहारीमा छन् । सिन्धुपाल्चोकलाई हिमालको जिल्ला भन्न उपयुक्त हुने स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय बताउँछन् ।
सिन्धुपाल्चोकमा थुप्रै हिमाल छन् । साढे पाँच हजार मिटर अग्ला हिमालमात्रै दर्जन हाराहारीमा छन् । सिन्धुपाल्चोकलाई हिमालको जिल्ला भन्न उपयुक्त हुने स्थानीय बताउँछन् ।
राजधानी नजिकका हिमाल खुल्दै Reviewed by Reporter Paryatannews on Aug 28 . सरकारले पहिलोपटक राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको सिन्धुपाल्चोकका दुई हिमाल आरोहण खुला गरेको छ । पछिल्लोपटक एक सय चार हिमालमा आरोहण अनुमति दिँदा यहाँका याङग्री र लेन् सरकारले पहिलोपटक राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको सिन्धुपाल्चोकका दुई हिमाल आरोहण खुला गरेको छ । पछिल्लोपटक एक सय चार हिमालमा आरोहण अनुमति दिँदा यहाँका याङग्री र लेन् Rating: 0
» सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ मा आउने